Homemade Shuga Makore | Kicheni Mapepa
Homemade shuga makore
Ana naAsu Chamorro | | General
Homemade shuga makore, ari nyore uye seaya akatengwa
Ndeapi jelly bhinzi aunofarira zvakanyanya? Kwandiri makore, ndinovadaidza izvo asi ivo vanozivikanwa sehamu, chipanji, mamota kana maruva, uye hongu, isu tese takadya, asi waiziva here kuti anogona kugadzirwa pamba, wakamboagadzira here?
Kugadzira makore ekugadzira pamba zviri nyore kwazvo uye vanobuda zvakafanana nevakatengwa, zvakare kana uine vana kumba ivo vanofara kukubatsira iwe kuzviita kuti vagone kudya zviwitsi zvavo. Ndinokukurudzira kuti uedze ivo kuitira kuti iwe uone kuti vakanaka sei. Ngatiendei neresipi.
Nguva yekugadzirira: 50 M
400 ml mvura
40 gr yekusarerekera gelatin
½ mukombe chibage
½ mukombe icing shuga
Tinotanga nekuisa mvura neshuga mupoto kusvikira yatanga kufashaira, panguva iyoyo tinoisa parutivi nekuisa gelatin. Dissolve mushe, dzokera kune yakaderera kwazvo kupisa kwemaminetsi mashoma, asi rega irege kuvira nekuti isu tinokanganisa iyo gelatin.
Isu tinoisa parutivi, wedzera iyo flavour uye womirira kuti itonhorere zvishoma, ingangoita 20'-30 'zvimwe kana zvishoma. Kana tichida mavara maviri ikozvino ndiyo nguva yekuparadzanisa yepakati uye nekuwedzera iro rakasarudzwa ruvara.
Zvichakadaro isu tinogadzira chakuumba uko kwatinozodurura mukanyiwa. Isu tinotora mukombe uye tinosanganisa shuga uye chibage chegorosi, tinosasa pamusoro peiyo yakasarudzwa furu kana pamusoro.
Isu tinotora yedu musanganiswa iyo inotonhora asi isina kukamurwa uye tinoidururira mugirazi re blender, rova ​​kwemaminetsi mashoma uye tichaona kuti musanganiswa unotanga kupupa furo. Inofanirwa kuve nehunhu senge meringue. Ita zvimwechetezvo nemavara maviri kana tavaparadzanisa.
Panguva iyoyo tinodurura mukanyiwa pamusoro peforoma nekukurumidza nekuti inoisa nekukurumidza. Ndakaiisa muhomwe yepastry, ndakaita zvidimbu patafura ine guruva uye ndakazviruka.
Tinomirira maawa mashoma kuti vagadzike zvakanaka uye vovarova mumusara wegorosi-shuga musanganiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » General » Homemade shuga makore
Pancakes nechokoreti ganache